ရန်ပိုင်| December 26, 2012 | Hits:8,437
4 | | အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သမ္မတရုံး)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန ၃၆ ခု လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာတွေကို ထိုင်း သတိပေး
21 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website sailay December 26, 2012 - 6:01 pm	(တခါပြောလဲသူမသိ၊နှစ်ခါပြောလဲသူမသိဆယ်ခါပြောတောင်သိမည့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး)မျက်၇ိပ်ပြလို့ သူမသိ
Reply	a December 26, 2012 - 6:30 pm	အောက်ခြေကတော့ရဲရဲတင်းတင်းကိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေကြတာပါ၊တိုင်ခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးနှိပ်ကွပ်တော့တာပါ။အထက်ကလည်းဒီအတိုင်းကြည့်နေတာပါ။သမ္မတကလူကြားကောင်းအောင်ပြောတတ်လုပ်တတ်တာကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးရုပ်သေးသက်သက်ပါ။တကယ်စေတနာပါခဲ့ရင်မှားတဲ့သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူလိုက်ရုံပါပဲ၊သမ္မတကအဲဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၊အဆင့်မရှိပါဘူး။
Reply	soe min December 26, 2012 - 7:43 pm	အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တပ်ကလူတွေရှိနေတာကိုဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး
Reply	Orisin Swetmarden December 26, 2012 - 9:15 pm	သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုထောက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြောတာဆိုတော့တတိယအ ကြိမ်လည်းပြောရအုံးမှာလားလို့ယူဆနိုင်ပါသေးတယ်၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို အပေါ်ကစပြီးထင်ထင်ရှား ရှားပြောင်းလဲမှအောက်ကလိုက်လာမယ်လိုထင်မိပါတယ်။
Reply	pps၁၂၃၄၅ December 26, 2012 - 9:33 pm	ငွေများ (သို့) လူကြီး ဝိတ်သုံး သော လူများ ကို ဖားယား အကျိုးဆောင် ပေးတတ် သော တရားရေး ဝန်ထမ်းများ၊ လူကြီးများ နှင့် ရင်းနှီးသော သူများကို မဖမ်းပဲ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့များကို သာ ဖမ်းသည့် ကာစတန်များ၊ မီဒီယာ ထောင်ကာ ကိုယ်ကျိုးရှာသူများ၊ လူကြီးနှင့် ရင်းနှီးသော ကုန်သည်များကို အထူးအခွင့် အရေးပေး တတ်သော ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီး ဝန်ထမ်းများ၊ ဆန္ဒပြသူများကို သာ နှိပ်ကွပ်တတ်ပြီး သူခိုးများ နှင့် မှောင်ခိုကုန်သည်များကို မဖမ်းသော ပြည်သူ့ရဲများ၊ လူကြီးများ နှင့် ရင်းနှီးသော ကုန်သည်များကို အထူး အခွင့်အရေးများ ပေးကာ တင်ဒါမခေါ်သော ဝန်ထမ်းများ၊ လူကြီး နှင့် ရင်းနှီးသူများကို အထူးအခွင့်အရေးများပေးကာ တစ်တောလုံးကုန်အောင် ခုတ်ခိုင်းသော ဝန်ထမ်းများ၊ လူကြီးနှင့် ရင်းနှီးသူ များကို သာ လုပ်ကွက်မျာ ချပေးသော သတ္တုတွင်း ဝန်ထမ်းများ စသော ဝန်ထမ်း အားလုံးကို အရေးယူပေးပါ သမ္မတကြီးခင်ဗျား။
Reply	U Thi Ha Tint Swe December 27, 2012 - 2:51 am	U Thein Sein should reform early his 1/4 Myanmar Junta Regime and his 08-constitution too with global democratic norms!
Reply	အောင်အောင် December 27, 2012 - 7:30 am	ပြောတာကတော့ပြောတတ်ကြပါတယ်။နားထောင်ရဲဖို့ပဲလိုပါတယ်။(ဝန်ထမ်းတွေအပါ အဝင်။ပြည်သူ အသံတွေကိုပါနားထောင် ရဲဖို့ ပါ)
Reply	Salai Lian December 27, 2012 - 7:40 am	Yes. The most important thing is to make amendments on 2008 constitution which is stumbling block to bring improvement. If Thein Sein is serious enough, he must replace this fake constitution drafted by Than Shwe’s people with the real constitution drafted by representatives elected by the citizens. The current government is on the sand or on the mud. We want to see our Union built on solid foundation. As long as the nation is underapoor law, there is no way the government can enforce effectively. Then, corruption will go on and on.
Reply	tin tun December 27, 2012 - 8:28 am	ပြောတောပြောတာဘဲ
Reply	sunny December 27, 2012 - 8:36 am	နိုင်ငံဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို သာမန်စီမံရုံဖြင့် မဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်း၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု အောင်မြင်အောင် အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား စီမံလုပ်ကိုင်မှု ထိရောက်ထက်မြက်ရန်လိုကြောင်း၊ ယခင် အတွေးအမြင် လုပ်နည်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ မရတော့ဘဲ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမြင့် အမြင်များ ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။
Reply	ဌေးဝင်း December 27, 2012 - 8:38 am	သမတကြီး၇ယ်……အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားဆိုတာ…အခုမှဖြစ်လာတဲ့….. အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားမဟုတ်ပါဘူး…..သမတကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့….စစ်အစိုး၇အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားပါ……..အခုမှ…မသိချင်ဆောင်ပြီး……ပြောမနေပါနဲ့……အပြောကတော့….သိန်းစိန်ပါဘဲ..ဖြစ်နေမယ်နော်။။။
Reply	myat December 27, 2012 - 12:11 pm	ကြိုတင်မဲ နဲ့ တက်လာတဲ့ သမတကြီးပါကွ မသိချင်ယောင်ဆောင်စရာလား-ဟားx1000
Reply	htoohtoo December 27, 2012 - 9:08 am	talk so good work losy
Reply	thuratun December 27, 2012 - 10:00 am	ကောင်းစေချင်လျှင် စစ်သားအရေခွံချွတ်၊လုံချည်ဝတ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်းစုဝန်ကြီးအားလုံး
Reply	mathae myin December 27, 2012 - 10:15 am	Uncle thein sein scaring due to DASSK says to beaPresident.
Reply	haymar December 27, 2012 - 10:34 am	Good sounds, but it becomes real?
Reply	ohnmar December 27, 2012 - 3:40 pm	သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုတော့လေးစားပါတယ်။သမ္မတကြီးလည်းလူကောင်းတစ်ယောက်
Reply	ပါကြီးဖိုး December 27, 2012 - 11:23 pm	သမတရဲ့ Good Governance, Clean Government ကြွေးကြွော်မှုအပေါ် လူတွေ ရိုးအီစပြုလာပါတယ်။
Reply	swe htwe December 29, 2012 - 7:08 pm	That’s right.
Reply	မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 5:59 pm	The President shoud show his wellingness to fight corruption. Especially should investigate connection between MIC Chairman and his new generation allies in government.
Reply	ဗမာ January 1, 2013 - 12:00 pm	လက်ရှိအစိုးရဟာ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေသလား၊ မကြိုးစားနေဘူးလားဆိုတာ ဝေးဝေးကြည့်နေဘို့မလိုပါ။ အောက်ခြေအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရွေးချယ်မှုအဆင့်မှာတောင် ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိတာဗျာ။ ကျန်တဲ့သူထက်ကြီးတဲ့အဆင့်တွေကိုတော့ဖြင့် ပြောဘို့ကိုမလိုတော့ဘူးထင်တယ်။